काठमाडौं मेयर शाक्यलाई भेटेर गगन थापाले दिएका सुझावहरु के के हुन्? - सिम्रिक खबर
काठमाडौं मेयर शाक्यलाई भेटेर गगन थापाले दिएका सुझावहरु के के हुन्?
पुर्व स्वास्थ्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई भेटेर ५ बुदे सुझाव दिएका छन् ।
उनले कोरोना महामारीमा आवश्यक स्रोत र जनशक्ति परिचालन गर्दै महानगरका संरचनालाई गतिशील बनाउन सुझाव दिए ।
‘काठमाडौँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय र प्रादेशिक जनप्रतिनिधिसंग नियमित संवाद र समन्वय गरी आवश्यक सहयोग लिनुस्। हामी सँगै काम गर्न चाहान्छौं।’ उनले भने, ‘तपाईँ सफल हुनुभनेको हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने नागरिक सुरक्षित हुनु हो, त्यसैले नियमित रूपमा समन्वय गर्नुहोस्।’
थापाले मेयर शाक्यलाई राखेका सुझाव:
५. काेराेना संक्रमण संग जाेडिएका विभिन्न सुचनाहरुलाई लिएर नगरवासी अलमलमा परेका छन्।नगरवासी अलमलमा परेका छन्। नगरवासीलाई अलमल नहोस् भन्नको लागि नागरिकलाई स्वास्थ्य लगायत कुनै पनि अफ्ठ्यारो पर्दा सम्पर्क र स